Waqtiyada Isbadelka Noolasha Raaxo
“Fursadda mar bey albaabka ku soo garaacdaa, markii dad badan ay yimaadeen gurigeyga oo ku yaallo degmada Yaaqshiid, waxa ay isugu kee sheegeen inay yihiin Shaqaalaha CISP waxa ayna i weydiyeen haddii aan dananeynayo inaan ku biiro barnaamij tababar xirfadeed ah oo ay bixinayeen. Waana ku raacay.
Goor dambe ayaa la isoo wacay la iina sheegay in aniga la i doortay inaan ku biiro 20 haween ah oo iyaguna qaadanayey tababarka. Tababarkani waxa uu ahaa mid aad u sareeyo; subax kasta ayaa la i qaadayey maqribkiina gurigeyga ayaa la isoo dhigayey intii uu socday tababarka. Waxaa la i baray sida loo sameeyo nigisyada haweenku ay isticmaalaan xiligga caado dhiigga, Somaliyana waxaa looga yaqaan nigasyadaasi “Always.”
Soo saaristaan nigasyadaani waxa ay ii ahayd fursad aad u fiican, waxa ay ii noqotay il aan daqli ka helo; CISP waxa ay ii ahayd suuq diyaarsan, Waxaan ka iibinayey waxyaabaha aan soo saaro. Celcelis ahaana waxaan mushaar ahaan toddobaadkiiba u heliyey $80 (sideedan dollar) illaa $100 (Boqol dollar), taa oo xaqiiqatan Sara u qaaday noolasheena waxa ayna ku soo beegantay xilli aan aad ugu baahnaa daqligaasi.
Heerkii labaad ee tababarka, Waxaan helay tababar lagu baranayey Xirfadaha Maareeynta Ganacsiga iyo Koorso iyana lagu baranayey harqaan tollida. Gaba-gabadii tababarka aniga iyo haweenkii kaleba waxa aan helnay harqaamanka wax lagu talo ee inoo suurto gelinayo inaan ku bilaawno ganacsigeena, waxaa kaloo la socday daaqado baati ah iyo dunta wax lagu talo.
Waxaan ku faraxsanahay xaqiiqada aan ku bilaawayo dharka aan dib ugu habeenayo ganacsiga. Waxaan meel ka heli doonaa Suuq ku yaallo Xaafadda halkaasi oo aan dhigan doono mashiinka aan wax ku toli doono si aan ugu talo dadka dharka ka soo jeex-jeexmo. Waxaan sidoo kale dabaqi doonaa xirfadaha ganacsiga ee aan bartay si aan u maamulo ganacsigeyga yar. Inta yar ee aan bartay ayaa i caawin doonto; waxa ay fududeeyn doontaa halgankeyga aan ku taageerayo carruurteyda,” sidaasi waxaa sheegtay Raaxo oo ah hooyo heysata 9 carruur ah oo ku nool Kaam Dad Barakacyaal ah ay ku nool yihiin oo ku yaallo Muqdisho.
W/Q: Salaad Geeddi Cali (Qaabilsanaha Warfaafinta iyo Laxisaabtanka)
Home Waqtiyada Isbadelka Noolasha Raaxo